Mitaraina amin’ny fahasimban’ny sakafo sy ny fitaovana vokatr’izany ireo mpanjifan’ny Jirama. Indrindra moa ireo mpivarotra hani-masaka sy mila mitahiry sakafo anaty vata fampangatsiahana. Eo am-pandrahoana sakafo amin’ny “Rice coocker” hatrany no tapaka ny jiro ny an’ny sasany hany ka simba hatramin’ilay fitaovana. Ny sakafo tehirizina anaty vata fampangatsiahana etsy ankilany masiso. Ny fanahian’ny mpanjifa amin’ny resaka mety ho fidanganan’ny vidin-jiro atsy ho atsy koa anefa mipetraka sahady, raha ny fanadihadiana natao. Ny vola mitombo hatrany no aloha saingy ny vokatra miha tsy mahafa-po.